သက်သာလောနိတ် သြဝါဒစာ ပထမစောင်။ – First Letter to the Thessalonians – JESUS UNLTD
သက်သာလောနိတ် သြဝါဒစာ ပထမစောင်။ – First Letter to the Thessalonians
၁ ပေါလု၊ သိလ နဲ့ တိမောသေတို့က အဖဘုရားရှင်နဲ့ သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ သက်သာလောနိတ်မြို့အသင်းတော်ကို စာရေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖဘုရားသခင်နဲ့ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဆီက ကျေးဇူးတော်နဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်း ရရှိကြပါစေ။
၂ ခင်ဗျားတို့အားလုံးအတွက်ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်း ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ ခင်ဗျားတို့ကို သတိရသလို ခင်ဗျားတို့အတွက် ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
၃ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ခင်ဗျားတို့တွေ ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်တွေကို လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့တွေ သတိရမှတ်မိနေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ဘုရားသခင်ကို ချစ်လို့ သူ့ကို အစေခံကြတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုကို ပြကြတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဖဘုရားသခင်နဲ့ အမြဲတမ်းအတူရှိနေတဲ့ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဆီမှာ ခင်ဗျားတို့တွေ မျှော်လင့်ခြင်းရှိဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
၄ ညီအစ်ကိုတို့၊ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို ရွေးချယ်တယ်၊ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိကြပါတယ်။
၅ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ဆီ ယူလာခဲ့တဲ့ ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းက စကားလုံးသက်သက်ပဲ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က တန်ခိုးအစွမ်းနဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့က ဘုရားရဲ့အမှန်တရားကို ပြောခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့က အပြည့်အဝ ယုံကြည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ကို ပုံသက်သေပြခဲ့တာ ခင်ဗျားတို့ သိကြပါတယ်။
၆ ကျွန်တော်တို့က ယေရှုအတိုင်း အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့က သခင်ယေရှုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို စပြီးအတုယူလာခဲ့ကြပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ဒုက္ခဆင်းရဲအများကြီး ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ ဘုရားစကားကိုခံယူပြီးတော့ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၇ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့က မာကေဒေါနိ နဲ့ အာခါယ မှာနေထိုင်တဲ့ ယုံကြည်သူအားလုံးအတွက် စံနမူနာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၈ ခင်ဗျားတို့က ဘုရားရဲ့စကားကို ဟောပြောခဲ့တာ မာကေဒေါနိ နဲ့ အာခါနိမှာပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့က ကျွန်တော်တို့ မရောက်ဖူးတဲ့ တခြားနေရာတွေမှာလည်း ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဘုရားသခင်အပေါ်ယုံကြည်မှုကို သတင်းပြန့်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီနေရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ လာတဲ့အခါမှာ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ ကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ် ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။
၉ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ ဒီလူတွေက ကျွန်တော်တို့တွေ ခင်ဗျားတို့ဆီကို ဘယ်လို တစ်ကြိမ်အလည်လာခဲ့ကြတာ၊ အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ခင်ဗျားတို့က ရုပ်တုဆင်းတုတွေကို ထားခဲ့ပြီးတော့ ဘုရားသခင်ဆီ လှည့်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြကြတယ်။ ပြီးတော့ အခုဆို ခင်ဗျားတို့တွေဟာ အသက်ရှင်ပြီးတော့ စစ်မှန်တဲ့ ဘုရားကို အစေခံကြပါတယ်။
၁၀ ဘုရားက သူ့ရဲ့သားတော်ကို သေခြင်းကနေ ပြန်အသက်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ အခု ခင်ဗျားတို့က ဘုရားရဲ့သားတော် ကောင်းကင်ဘုံကနေ ကြွလာမဲ့အချိန်ကို စောင့်နေကြပါတယ်။ မကြာခင် ဘုရားရှင်က လူတွေကို သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကြောင့် အမျက်ဒေါသထွက်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သခင်ယေရှုက ဘုရားရှင်ရဲ့အမျက်ဒေါသကနေ ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 1 Paul, Silas and Timothy write to the Thessalonian church which belongs to God the Father and the Lord Jesus Christ. Receive grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ.
2 We always thank God for all of you. We remember you and pray for you.
3 We keep remembering what kind of works you did because of your faith. You serve God because you love Him. You show your patience. And it helps you to have hope in the Lord Jesus Christ who is in the presence of our God the Father.
4 Brothers, you know that God chose you, and He loves you.
5 When we brought you the Good News about Christ, it was not just words. We spoke with power and in the Holy Spirit. And it fully convinced you that we spoke the truth. You know that we showed you an example.
6 We lived like Jesus did. And you began to imitate us and the Lord. You sufferedalot, but you accepted the Word and rejoiced in the Holy Spirit.
7 So you became an example for all believers in Macedonia and Achaia.
8 The Word of God sounded out not only there. You also spread your faith in God in other places where we have never been before. So when we come to those places, we do not need to tell anything about ourselves there.
9 It is the opposite, those people tell us about how we once visited you, and after that you turned from idols to God. And now you serve the living and the true God.
10 God raised His Son from the dead. And now you are waiting for the Son of God to come from heaven. Soon God will be angry with people for their sins, but Jesus will save us from God’s anger.
၁ ညီအစ်ကိုတို့၊ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ဆီကို လာလည်ခဲ့တာ အချည်းနှီးမဖြစ်မှန်း ခင်ဗျားတို့ သိကြပါတယ်။
၂ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ဆီကို မလာခင်က ဖိလိပ္ပိမှာ လူတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ဆက်ဆံခဲ့ကြလို့ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ ဒုက္ခခံခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို ရဲရင့်ခြင်းပေးခဲ့လို့ ကျွန်တော်တို့က ပြင်းထန်တဲ့ အတိုက်အခံကြားကနေ ယေရှုအကြောင်းသတင်းကောင်းကို ခင်ဗျားတို့ဆီ ဟောပြောခဲ့ကြတာ ခင်ဗျားတို့ သိကြပါတယ်။
၃ ကျွန်တော်တို့က ဘုရားရဲ့စကားကို လူတွေဆီ ဟောပြောသွန်သင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ လူတွေကို မလိမ်ညာပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာ မမှန်ကန်တဲ့ဆန္ဒတွေမရှိသလို လူတွေကို မလှည့်စားကြပါဘူး။
၄ ဘုရားရှင်က ကျွန်တော်တို့ကို သူ့ဆီမှာ အစေခံဖို့ထိုက်တန်တဲ့သူ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ယေရှုအကြောင်းသတင်းကောင်းကို ဟောပြောဖို့ ဘုရားရှင်က ကျွန်တော်တို့ကို ယုံကြည်စိတ်ချခဲ့ပါတယ်။ သတင်းကောင်းကို ပြောတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့က ဘုရားကို ကျေနပ်နှစ်သက်စေတာဖြစ်ပါတယ်၊ လူတွေကို မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်နှလုံးထဲမှာ ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာ ဘုရားရှင်က စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။
၅ ကျွန်တော်တို့တွေ ခင်ဗျားတို့ကို ဘယ်တုန်းကမှ မမြှောက်ပင့်ခဲ့တာ ခင်ဗျားတို့ သိကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ခင်ဗျားတို့ကို အခွင့်ကောင်းယူဖို့ မကြိုးစားခဲ့ဘူးဆိုတာ ဘုရားက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်မြင်သက်သေ ဖြစ်ပါတယ်။
၆ ကျွန်တော်တို့ကို ချီးမွမ်းဖို့ ခင်ဗျားတို့ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သူကိုမှ ကျွန်တော်တို့ မလိုချင်ပါဘူး။
၇ ကျွန်တော်တို့က ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဆီမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခွင့်အာဏာကို သုံးလို့ရခဲ့ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ နို့တိုက်မိခင်က သူ့ရဲ့ရင်သွေးတွေကို ဂရုတစိုက်ပြုစုစောင့်ရှောက်သလို ကျွန်တော်တို့က ခင်ဗျားတို့ကို နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ ဂရုစိုက်ခဲ့ပါတယ်။
၈ ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော်တို့တွေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ကို ဘုရားရှင်အကြောင်း သတင်းကောင်းချည်းပဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသက်ဝိညာဉ်ကိုပါ ပေးချင်ခဲ့တာပါ။
၉ ညီအစ်ကိုတို့၊ ကျွန်တော်တို့တွေ ခင်ဗျားတို့ဆီမှာ ဘုရားရှင်အကြောင်း သတင်းကောင်းကို ဘယ်လို ဟောပြောခဲ့သလဲဆိုတာ မှတ်မိကြသေးရဲ့လား။ ကျွန်တော်တို့တွေ အလုပ်လုပ်ပြီး ခြေကုန်လက်ပန်းကျခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ နေ့ညမပြတ် ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ထဲက ဘယ်သူ့ကိုမှ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။
၁၀ ယေရှုကိုယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ ခင်ဗျားတို့အပေါ်မှာ သန့်ရှင်းခြင်း၊ တရားမျှတခြင်း နဲ့ အပြစ်တင်စရာမရှိအောင် ကျွန်တော်တို့တွေ ပြုမူခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့က သက်သေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘုရားရှင်လည်း သက်သေ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁ ခင်ဗျားတို့ တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းအပေါ်မှာ အဖေတစ်ယောက်က ကိုယ့်သားသမီးတွေကို ပြုမူတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့တွေက ပြုမူခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိကြပါတယ်။
၁၂ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို သူ့ဆီလာဖို့ ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကို ခင်ဗျားတို့တွေ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဘုန်းကျက်သရေကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့က “ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီ အသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါ။” လို့ ခင်ဗျားတို့ကို လေးလေးနက်နက်နဲ့ စည်းရုံးတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။
၁၃ ခင်ဗျားတို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ကျွန်တော်တို့ အမြဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ကျွန်တော်တို့ဆီက ဘုရားရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါ လူ့စကားအဖြစ် သဘောမထားဘဲနဲ့ ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားအဖြစ် ခင်ဗျားတို့က လက်ခံခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားရဲ့စကားက အမှန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။ ခင်ဗျားတို့က ဘုရားရဲ့စကားကို ယုံကြည်ကြလို့ ဘုရားရဲ့စကားက ခင်ဗျားတို့ အထဲမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
၁၄ ယုဒမှာရှိတဲ့ ယုံကြည်သူတွေက ဘုရားရှင်နဲ့ သက်ဆိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေက ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက် ယုဒလူမျိုးတွေက သူတို့ကို စတင်ပြီး ညှင်းပန်းနှိက်စက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ညီအစ်ကိုတို့၊ အဲ့ဒီက ယုံကြည်သူတွေဆီမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ခင်ဗျားတို့လည်း ခင်ဗျားတို့ရဲ့လူမျိုးဆီကနေ ဒုက္ခဆင်းရဲ ခံခဲ့ကြရပါတယ်။
၁၅ ယုဒလူမျိုးတွေက သခင်ယေရှုနဲ့ ဘုရားရှင်ဆီကကြားတဲ့ ဘုရားစကားကို လူတွေဆီပြောပြခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ပရောဖက်တွေကို သတ်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း ညှင်းပန်းနှိက်စက်ကြတယ်။ သူတို့တွေက လူတွေအားလုံးနဲ့ ရန်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့ ဘုရားရှင် မနှစ်သက်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
၁၆ ကျွန်တော်တို့က ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့သူတွေဆီမှာ ယေရှုက အပြစ်ကနေ ကယ်တင်တဲ့အကြောင်း ပြောပြကြပေမဲ့ ယုဒလူမျိုးတွေက ကျွန်တော်တို့ကို နှောင့်ယှက်တားမြစ်ကြတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ယုဒလူမျိုးတွေက သူတို့ရဲ့အပြစ်ပမာဏကို တိုးပွားစေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာကြီးအဆုံးသတ်ဖို့ နီးကပ်လာပါပြီ၊ ဘုရားက သူတို့ကို အမျက်ဒေါသထွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၇ ညီအစ်ကိုတို့၊ ကျွန်တော်တို့က ခင်ဗျားတို့နဲ့ ခဏတာ ခွဲခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ ခင်ဗျားတို့တွေ ရှိနေတာကြောင့် ခင်ဗျားတို့ကို ထပ်ပြီးတော့ အရမ်းတွေ့ချင်ပါတယ်။
၁၈ ခင်ဗျားတို့ဆီကို ကျွန်တော်တို့တွေ လာချင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပေါလုက ခင်ဗျားတို့ဆီ လာဖို့ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ နှစ်ကြိမ်စလုံးမှာ စာတန်က ကျွန်တော်တို့အတွက် အတားအဆီးတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့က ဘုရားရှင်ကို ဆက်ပြီး အစေခံနေကြတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သခင်ယေရှုခရစ်တော် ကမ္ဘာကြီးကို ပြန်ကြွလာတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့က ခင်ဗျားတို့ကို မြင်တွေ့ရပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ရဲ ခင်ဗျားတို့ဆီ အစေခံကို ကျွန်တော်တို့ကို ချီးကျူးပြီးတော့ ဆုချမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀ ကျွန်တော်တို့က ခင်ဗျားတို့အတွက် ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ ဘုရားသခင်က ချီးမွမ်းလို့ ကျွန်တော်တို့တွေ ဝမ်းသာကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 1 Brothers, you know that we did not visit you in vain.
2 But before we came to you people treated us cruelly in Philippi, and we suffered there. And you know that God gave us courage, and we preached to you the Good News about God in spite of great opposition.
3 When we teach people, we do not deceive them. We do not have wrong desires, and we do not trick people.
4 God made us worthy to serve Him. He trusted us to preach the Good News about Jesus. When we speak the Good News, we please God, not people. And God watches what is happening in our hearts.
5 You know that we never flattered you. And God can confirm that we did not try to take advantage of you.
6 We do not want you or anyone else to glorify us.
7 We are the apostles of Christ. We could exercise our authority over you, but we behaved quietly. We gently cared for you asanursing mother would care for her children.
8 We loved you. That is why we wanted you not only to accept the Good News about God, but also to understand what is happening in our hearts.
9 Brothers, do you remember how we preached the Good News about God to you? We worked so hard that we felt extremely exhausted. We labored day and night because we did not want to becomeaburden to any of you.
10 And you, believers, can confirm that we behaved with you inaholy, just, and blameless manner. God also can confirm it.
11 You know that we treated each one of you the same way asafather would treat his children.
12 When God called you to come to Him, you entered His Kingdom and saw His glory. That is why we asked you, convinced and insisted, "Live in suchaway that you would meet the requirements which God gave us.”
13 We continuously thank God for you. When you heard the Word of God from us, you accepted it as if God spoke the Word, notaman. And for sure the Word of God is the truth. You believe in God’s Word, and the Word works in you.
14 The churches which are located in Judea belong to God. They believe in Jesus Christ, that is why the Jews began to persecute them. Brothers, the same thing happened to you just as to those churches. You also suffered from your own people.
15 The Jews killed the Lord Jesus and His prophets. They persecute us also. The Jews oppose God and they are hostile to all people.
16 When we speak to the Gentiles about salvation, the Jews hinder us. This way the Jews keep filling up the measure of their sins. But the end is coming near, and God will be angry with the Jews.
17 Brothers, forashort time we were separated from you. And we haveabig desire to see you again because we have you in our hearts.
18 We wanted to visit you. I, Paul, tried to do this once and then second time, but Satan made obstacles for us.
19 But we hope that you keep serving God. And when our Lord Jesus Christ returns to the earth, we will see you and rejoice with you. Then God will praise us and give usareward for our ministry to you.
20 We will rejoice because God will say that we worked well among you.
၁ အခက်အခဲတွေကြောင့် အာသင်မြို့မှာ နေဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၂ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က ညီလေးတိမောသေကို ခင်ဗျားတို့ဆီ လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ တိမောသေက ဘုရားသခင်ကို အစေခံနေပါတယ်။ သူက ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူတူ အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းကို ဖြန့်ဝေပါတယ်။ တိမောသေက ခင်ဗျားတို့ကို လမ်းပြကူညီပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို ခိုင်မာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃ ခင်ဗျားတို့ ဘဝအသက်တာထဲမှာ ဒုက္ခပြဿနာတွေ ရောက်လာခဲ့ရင်လည်း အထိတ်တလန့် မဖြစ်ကြပါနဲ့။ ဒါတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ကြုံတွေ့ရမဲ့အရာပဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိကြပါတယ်။
၄ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ဆီ လာခဲ့တုန်းက ကျွန်တော်တို့တွေက ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံကြရမယ်ဆိုတာ ကြိုတင် ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအတိုင်းပဲ တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိကြပါတယ်။
၅ ပြီးတော့ ကျွန်တော် ထပ်ပြီးမစောင့်ချင်တော့လို့ တိမောသေကို ခင်ဗျားတို့ဆီ လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်ကြရဲ့လားဆိုတာ ကျွန်တော် သိချင်ခဲ့ပါတယ်။ စာတန်မာရ်နတ်က လူတွေကို စုံစမ်းဖျားယောင်းသွေးဆောင်တာတွေ လုပ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် စာတန်က ခင်ဗျားတို့ကို လမ်းလွဲစေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်က အကျိုးမရှိဖြစ်သွားမှာကို ကျွန်တော် စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ပါတယ်။
၆ ဒါပေမဲ့ တိမောသေက ကျွန်တော်တို့ဆီ ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ သတင်းကောင်းတွေ ယူလာပေးခဲ့ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ဘုရားသခင်ကို ဆက်ပြီးတော့ ယုံကြည်ကြတယ်၊ ပြီးတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မေတ္တာထားကြတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ကျွနု်ပ်တို့အကြောင်းကို အမြဲတမ်းကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြောကြတယ်။ ပြီးေတော့ ကျွနု်ပ်တို့က ခင်ဗျားတို့ကို တွေ့ချင်နေသလိုပဲ ခင်ဗျားတို့ကလည်း ကျွနု်ပ်တို့ကို တွေ့ချင်နေကြတယ်။
၇ ညီအစ်ကိုတို့၊ ကျွန်တော်တို့က ဒုက္ခဆင်းရဲတွေ ဖြတ်သန်းကြရတယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ လိုအပ်ချက်တွေလည်း အရမ်းများနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုက ကျွန်တော်တို့ကို အားတက်စေခဲ့ပါတယ်။
၈ ခင်ဗျားတို့က သခင်ယေရှုနောက် မြဲမြဲလိုက်နေလို့သာ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ရှင်သန်နိုင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉ ခင်ဗျားတို့အတွက်ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လုံလောက်အောင် ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်လိုပြောရပါ့မလဲ။ ခင်ဗျားတို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘုရားသခင် ရှေ့မှောက်မှာ တကယ့်ပျော်ရွှင်မှုကို တွေ့ကြုံခံစားရပါတယ်။
၁၀ ခင်ဗျားတို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ နေ့ညမပြတ် လေးလေးနက်နက် ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ ခင်ဗျားတို့ကို တွေ့ချင်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာ မပြည်စုံသေးတဲ့အရာတွေကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။
၁၁ အဖဘုရားသခင်နဲ့ သခင်ယေရှုခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို ပြင်ဆင်ပေးပါစေ။
၁၂ သခင်ယေရှုက ကျွန်တော်တို့ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပြည့်စေခဲ့လို့ ကျွန်တော်တို့က ခင်ဗျားတို့ကို ချစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့တွေလည်း အချင်းချင်းနဲ့ လူတွေအားလုံးကိုပါ ချစ်ကြဖို့ သခင်ယေရှုက ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပြည့်စေပါစေ။
၁၃ တခြားသူတွေကို ချစ်ကြပါ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားခြင်းက ခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကို ခွန်အားဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်မှုက ခင်ဗျားတို့ရဲ့ နှလုံးသားကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီးတော့ သူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာ ခင်ဗျားတို့ကို အပြစ်ကင်းတဲ့သူ ဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်က သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့ သန့်ရှင်းသူတွေအားလုံးနဲ့အတူ ကမ္ဘာကြီးကို ဆင်းကြွလာတဲ့အခါ ခင်ဗျားတို့တွေက အဖဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာ ရပ်ခွင့်ရကြမယ်။
အာမင် - ပြည့်စုံပါစေ။ 1 We decided to stay in Athens because of the difficulties.
2 But we sent to you our brother Timothy who serves God. He works together with us and spreads the Good News about Christ. Timothy can support you and make your faith strong.
3 You know that in this life we cannot avoid persecutions and troubles. So do not panic, if you are going through sufferings.
4 When we visited you last time, we predicted that we would suffer. And you know that it happened the way we spoke.
5 I could not visit you so I did not wait any longer and sent Timothy to you. I wanted to know if you live by faith. I was afraid that the tempter would mislead you, and our work would not bring results.
6 But Timothy already returned and brought us good news about you. We know that you continue to believe in God and love one another. You always speak kind words about us, and you want to see us as much as we want to see you.
7 Brothers, we go through sufferings and live in need. But you encouraged us the way you believe.
8 You keep following the Lord, and it fills us with life.
9 How can we give enough thanks to God for you?
Because of you, we experience great joy when we come into the presence of our God.
10 Day and night we pray earnestly for you. We would like to see you to add what your faith is lacking.
11 May God the Father and the Lord Jesus Christ arrange our journey to you.
12 The Lord filled us with love that is why we love you. May He also fill you with love so that you would love one another and all people.
13 Love others, and it will make your hearts strong. God's holiness will cleanse your hearts and make you blameless in the eyes of God. Then you will be able to stand in the presence of God the Father when the Lord Jesus Christ comes to earth with all the holy people of God. Amen.
၁ ညီအစ်ကိုတို့၊ ခင်ဗျားတို့တွေ ဘယ်လိုပြုမူသင့်တယ်၊ ဘုရားသခင်ကို ဘယ်လိုနှစ်သက်သဘောကျစေသင့်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမည်ကို ထောက်ထားပြီး ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ ဘုရားကို ပိုပိုပြီးနှစ်သက်ကျေနပ်စေကြပါလို့ ခင်ဗျားတို့ကို တောင်းပန်ရင်းနဲ့ တောင်းဆိုပါတယ်။
၂ ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော်တို့ ပေးခဲ့တဲ့ သခင်ယေရှုဆီက ပညတ်ချက်တွေကို ခင်ဗျားတို့ သိကြပါတယ်။
၃ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကောင်းမှုအပြစ်ကနေ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီးတော့ ဘုရားလိုချင်တဲ့အတိုင်း နာခံလိုက်လျှောက်ကြပါ။ လိင်ကိစ္စနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်ပျက်ခြင်းမှာ မပါကြပါနဲ့။
၄ ခင်ဗျားတို့ တစ်ဦးချင်းစီက ခင်ဗျားတို့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကို ထိန်းချုပ်ကြရမယ်။ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ အသက်ရှင်ပြီး လိင်ကိစ္စနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်ပျက်ခြင်းမှာ မမွေ့လျော်ကြပါနဲ့။
၅ ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့သူတွေလို မပြုမူပါနဲ့။ သူတို့က ဘုရားသခင်ကို မသိကြသလို သူတို့ရဲ့ ကိလေသာတပ်မက်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်တွေနဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဖျက်ဆီးကြတယ်။
၆ ကိုယ့်ရဲ့ညီအစ်ကိုတွေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ အမြတ်မထုတ်ကြပါနဲ့။ ကိုယ့်အကျိုးအတွက်နဲ့ အချင်းချင်း မလိမ်ညာကြပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့ ဒီအကြောင်းကို အရင်က ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အပြုအမူတွေကြောင့် သခင်ဘုရားက လူတွေကို အပြစ်ပေးဒဏ်ခတ်မယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော်တို့ သွန်သင်ခဲ့ပါတယ်။
၇ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မကောင်းတဲ့အလိုဆန္ဒတွေနောက်ကို မလိုက်ကြပါနဲ့။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း အသက်ရှင်ဖို့ိ ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၈ ဒါကို ငြင်းပယ်တဲ့သူက လူကိုငြင်းပယ်တာမဟုတ်ပဲ ကျွန်တော်တို့ဆီ သူ့ရဲ့သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့တဲ့ ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၉ ဘုရားသခင်က တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားဖို့ ခင်ဗျားတို့ကို သွန်သင်ပေးတဲ့အတွက် ညီအစ်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းကို ကျွန်တော် ရေးနေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။
၁၀ ခင်ဗျားတို့က မာကေဒေါနိ တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေအားလုံးအပေါ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားကြပါတယ်။ ညီအစ်ကိုတို့၊ ခင်ဗျားတို့တွေ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပိုပိုပြီးတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားကြဖို့ ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
၁၁ ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော်တို့ သင်ကြားပေးခဲ့တာတွေကို အစွမ်းကုန်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ကြပါ။ အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ပြီး ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ကြပါ၊ ကိုယ့်လက်နဲ့ အလုပ်လုပ်ကြပါ။
၁၂ ဒီလိုဆို ခင်ဗျားတို့က ဘာလိုအပ်ချက်မှမရှိဘဲ လိုအပ်သမျှပြည့်စုံနေမှာပါ။ မယုံကြည်သူတွေနဲ့လည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြုမူဆက်ဆံကြပါ။
၁၃ ညီအစ်ကိုတို့၊ သေလွန်သွားကြပြီဖြစ်တဲ့ ယုံကြည်သူတွေဆီ ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ကို သိစေချင်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့ မယုံကြည်သူတွေလို မပူဆွေးကြပါနဲ့။
၁၄ ယေရှုခရစ်တော်က သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ သခင်ယေရှု ကမ္ဘာကြီးကို ပြန်ကြွလာတဲ့အခါ ဘုရားသခင်က သေလွန်သွားကြပြီဖြစ်တဲ့ ယေရှုယုံကြည်သူတွေကို ယေရှုနဲ့အတူ ခေါ်ဆောင်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
၁၅ ကျွန်တော်တို့က သခင်ယေရှုရဲ့စကားကို ခင်ဗျားတို့ဆီ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ သေလွန်သွားကြပြီဖြစ်တဲ့ ယုံကြည်သူတွေဟာ သခင်ယေရှု ဆင်းကြွလာတာကို အရင်ဦးဆုံး မြင်တွေ့ရမဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ကမ္ဘာကြီးမှာ အသက်ရှင်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေက သခင်ယေရှုကို မြင်တွေ့ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၆ အဲ့ဒီနေ့မှာ အဆင့်အမြင့်ဆုံးကောင်းကင်တမန်က သူ့ရဲ့အသံကို မြှင့်ပြီး အော်လိမ့််မယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့တံပိုးခရာမှုတ်သံ ထွက်လာပြီးတော့ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် ကောင်းကင်ကနေ ဆင်းကြွလာပါလိမ့်မယ်။ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ဘုရားသခင်က အရင်ဦးဆုံး သေခြင်းကနေ ပြန်ပြီးအသက်ရှင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၇ ဒါတွေပြီးရင် ကမ္ဘာကြီးမှာ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေက အသက်ပြန်ရှင်တဲ့သူတွေနဲ့အတူ မိုးတိမ်ထဲကို တက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က သခင်ယေရှုကို လေထဲမှာတွေ့ဆုံကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့က သခင်ယေရှုနဲ့ ထာဝရပေါင်းစည်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၈ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီစကားတွေနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နှစ်သိမ့်အားပေးကြပါ။ 1 Brothers, we taught you how you should behave and please God. So in the name of Jesus Christ we ask and encourage you to please God with your actions more and more.
2 You know the commandments which we gave you from the Lord Jesus.
3 Submit to the will of God and cleanse yourself from sin. Do not take part in sexual immorality.
4 Each of you must control the desires of your body. Live holy and don’t indulge in sexual immorality.
5 Do not behave like the Gentiles. They do not know God, they satisfy their lust and destroy themselves with their sinful habits.
6 Do not take advantage of your brothers. Do not deceive one another for your own interest. We talked about it before and taught you that the Lord will bring punishment for such actions.
7 Do not follow your evil desires because God called us to live holy.
8 He who rejects our teaching, does not rejectaman, but God who gave us His Holy Spirit.
9 I have no need to write about brotherly love because God teaches you to love one another.
10 You treat with love all the believes who live in Macedonia. Brothers, we would like to encourage you to love one another more and more.
11 Put all your efforts to follow what we taught you. Live in peace with one another, do your work and labor with your hands.
12 Then you will lack nothing. And also you should behave with unbelievers inagood manner.
13 Brothers, I want you to know what will happen to the believers who have already died. Do not grieve like other people who have no hope.
14 We believe that Jesus died and was resurrected. We also believe that when He returns to the earth, God will bring along with Him the believers who have already died.
15 We speak to you the Word of the Lord. In the beginning the coming of the Lord will see those believers who have already died. And then we who remained to live on the earth will see the Lord.
16 At that day the most high angel will lift up his voice, God’s trumpet will sound, and the Lord Himself will come down from heaven. In the beginning God will resurrect from the dead those people who believed in Christ.
17 After that we who remained to live on the earth will rise up in the clouds with the resurrected people. And we will meet the Lord in the air. This way we will be united with the Lord forever.
18 So comfort one another with these words.
၁ ညီအစ်ကိုတို့၊ အချိန်နဲ့ နေ့ရက်ကာလအကြောင်းတွေ ကျွန်တော် ရေးနေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။
၂ သူခိုးက ညအချိန်မှာ လာတတ်သလိုပဲ သခင်ယေရှု လာမဲ့နေ့ရက်လည်း မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သေသေချာချာ သိကြပါတယ်။
၃ လူတွေက “ငြိမ်းချမ်းပါပြီ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံပါပြီ။” လို့ ပြောတဲ့အချိန်မှာဘဲ သူတို့ဆီကို ကပ်ဘေးတွေ ရုတ်တရက် ရောက်လာလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဝန်သည်က မီးဖွားချိန်နာကျင်မှုကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လို့ မရသလိုဘဲ သခင်ယေရှု ကြွလာမှာကို ဘယ်သူမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လု့ိ မရပါဘူး။
၄ ညီအစ်ကိုတို့၊ ခင်ဗျားတို့က အမှောင်ထဲမှာ နေကြတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် သခင်ယေရှု လာမဲ့နေ့ရက်က ညမှာလာတဲ့ သူခိုးလို ခင်ဗျားတို့ကို အမှတ်တမဲ့ အံ့အားသင့်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၅ ခင်ဗျားတို့ အားလုံးက နေ့အချိန်မှာမွေးတဲ့ အလင်းရဲ့သားသမီးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျွနု်ပ်တို့က ညအချိန်မှာမွေးခဲ့တဲ့ မှောင်မိုက်ရဲ့သားသမီးတွေမဟုတ်ပါဘူး။
၆ အဲ့ဒါကြောင့် တခြားလူတွေလို အိပ်မနေကြပါနဲ့။ ဝိညာဉ်ရေးရာမှာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို မပျောက်ပျက်စေပါနဲ့။ သောက်စားခြင်းမပြုဘဲ သမ္မာသတိရှိရှိ အသက်ရှင်ကြပါ။
၇ ညအချိန်မှာ တစ်ချို့လူတွေက အိပ်ကြပြီးတော့ တစ်ချို့လူတွေက မူးယစ်ကြတယ်။
၈ ဒါပေမဲ့ နေ့မှာမွေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ သောက်စားခြင်းမပြုဘဲ သမ္မာသတိရှိကြမယ်။ ကျွနု်ပ်တို့က ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြပြီးတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ကျွနု်ပ်တို့ကို သံချပ်ကာလို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ယေရှုက ကျွန်တော်တို့ကို အပြစ်ကနေ ကယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့တွေ စိတ်ချယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုကို ကျွန်တော်တို့ခေါင်းပေါ်မှာ သံခမောက်လို ဆောင်းထားကြပါတယ်။
၉ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ အပေါ် အမျက်ဒေါသမထွက်ဖို့ ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့သခင် ယေရှုခရစ်တော်က ကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေခံပေးခဲ့ပြီးတော့ ကျွနု်ပ်တို့ကို အပြစ်ကနေ ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၀ သခင်ယေရှု ကမ္ဘာကြီးကို ပြန်ကြွလာတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ချို့တွေက အသက်ရှင်နေကြဦးမှာဖြစ်ပြီးတော့ တစ်ချို့ကတော့ သေပြီးသား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရစ်တော်နဲ့အတူတူ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်အသက်ရှင်စေလိမ့်မယ်။
၁၁ ခင်ဗျားတို့တွေက အချင်းချင်း နှစ်သိမ့်ပြီးတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြံ့ခိုင်စေကြတယ်။ ဒီအတိုင်းဘဲ ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်ကြပါ။
၁၂ ညီအစ်ကိုတို့၊ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့အစေခံတွေကို ခင်ဗျားတို့ အပေါ်မှာ ခန့်ထားတယ်။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ကြားမှာ အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ကို သွန်သင်ပေးတဲ့ ဘုရားအစေခံနေတဲ့သူတွေကို လေးစားကြဖို့ ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
၁၃ သူတို့ လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာတွေအတွက် သူတို့ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားကြပါ။ သူတို့ကို အထူး တန်ဖိုးထားကြပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သင့်သင့်မြတ်မြတ် နေထိုင်ကြပါ။
၁၄ ညီအစ်ကိုတို့၊ ကိုယ့်ဘဝကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့သူတွေကို ဆုံးမပဲ့ပြင်ဖို့ အထူးတောင်းဆိုပါတယ်။ ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ အသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေကို အားပေးကြပါ။ အားနည်းတဲ့သူတွေကို ထောက်ပံ့ကူညီကြပါ။ ပြီးတော့ လူတိုင်းအပေါ် စိတ်ရှည်သည်းခံကြပါ။
၁၅ ဘယ်သူမှ မကောင်းမှုကို မကောင်းမှုနဲ့ ပြန်တုန့်ပြန်တာမျိုး မလုပ်ဖို့ သတိပြုကြပါ။ အချင်းချင်းအပေါ်မှာရော ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့သူတွေအပေါ်မှာရော ကောင်းတဲ့အရာကို လုပ်ပေးဖို့ အမြဲတမ်းကြိုးစားကြပါ။
၁၆ အမြဲတမ်း ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ကြပါ။
၁၇ မှန်မှန် ဆုတောင်းကြပါ။
၁၈ ခင်ဗျားတို့ဟာ ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ သက်ဆိုင်ကြတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဘုရားရှင်က ခင်ဗျားတို့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခြေအနေတွေတိုင်းမှာ သူ့ကို ကျေးဇူးတင်စေချင်ပါတယ်။
၁၉ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ မီးအရှိန်ကို မငြိမ်းစေကြပါနဲ့။
၂၀ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်က ယုံကြည်သူတွေဆီ ပေးအပ်တဲ့ ပရောဖက်ပြုချက်တွေကို မထီမဲ့မြင်မပြုကြပါနဲ့။
၂၁ အရာရာကို စစ်ဆေးပြီးတော့ မှန်ကန်တဲ့အရာပေါ်မှာ ရပ်တည်ကြပါ။
၂၂ မကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှမှာ မပါဝင်ကြပါနဲ့။
၂၃ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို ငြိမ်သက်ခြင်းပေးပြီးတော့ သူကိုယ်တိုင် ခင်ဗျားတို့ကို လုံးဝသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပါစေ။ သခင်ယေရှုခရစ်တော် ကမ္ဘာကြီးကို ပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်အထိ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ဝိညာဉ်ကို အပြစ်ကနေ အပြည့်အဝ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါစေ။
၂၄ ခင်ဗျားတို့ကို ခေါ်ယူတဲ့ ဘုရားက သစ္စာရှိတဲ့အတွက် ခင်ဗျားတို့ကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီးတော့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၅ ညီအစ်ကိုတု့ိ၊ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဆုတောင်းပေးကြပါ။
၂၆ ညီအစ်ကိုတွေအားလုံးကို သန့်ရှင်းတဲ့ အနမ်းနဲ့ နှုတ်ဆက်ပေးပါ။
၂၇ ဒီစာကို ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သန့်ရှင်းသူတွေအားလုံးဆီ ဖတ်ပြဖို့ သခင်ယေရှုနာမည်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော် အထူးတောင်းဆိုပါတယ်။
၂၈ ကျွန်တော်တို့သခင် ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်က ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူ တည်ရှိပါစေ။ အာမင် - ပြည့်စုံပါစေ။ 1 Brothers, I have no need to write about time and dates.
2 You already know that the day of the Lord will come as unexpectedly asathief comes at night.
3 When people say “peace and safety” then suddenly disaster will fall upon them. Asapregnant woman is not able to avoid the pain of childbirth, so no one will be able to avoid the coming of the Lord.
4 Brothers, you do not live in the darkness. So the day of the Lord will not surprise you likeathief who comes at night.
5 You all were born of light during the day. We were not born of darkness during the night.
6 That is why you should not sleep like other people. Do not lose your interest in spiritual things. You should liveasober life.
7 One person sleeps at night, and another one gets drunk.
8 But we were born during the day that is why we should live soberly. We believe in God and treat people with love, and it protects us like an armor. And we put the confidence of salvation on our head which protects us likeahelmet.
9 God decided in advance that He would not be angry with us. And we received salvation because our Lord Jesus Christ died on the cross for us.
10 Some of us will be alive, and others will already die when the Lord returns to the earth. But God will resurrect us so that we could live with Christ.
11 That is why you should continue to comfort one another and make faith of one another strong with these words.
12 Brothers, we ask you to respect the ministers whom God put over you. They work among you and teach you the Word of God.
13 Love them and value them high for what they do. Live in peace with one another.
14 Brothers, we beg you to correct those who make mess with their lives. Encourage those who live in fear. Support those whose faith is weak. And be very patient with all people.
15 Watch that no one pays back evil for evil. Always put your efforts to do good to one another and to everyone around you.
18 You belong to Jesus Christ. And God wants you to thank Him in all circumstances.
19 Do not quench the fire of the Holy Spirit.
21 Test everything and stand on what is right.
22 Do not participate in any evil activities.
23 God is the source of peace. And may He himself sanctify you completely. May God fully keep your spirit, soul, and body safe from sin until the day when our Lord Jesus Christ returns to the earth.
24 God will do it because He called you to Himself so that you could see His faithfulness.
27 In the name of the Lord I beg you to read this letter to all the holy people of God.
28 May the grace of our Lord Jesus Christ remain with you. Amen.